Hababka in xogta laga macruufka wareejiyo LG
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga macruufka Qalabka inay LG Phones
Qeybta 1: Arrimaha ku saabsan xogta laga qalabka macruufka gudbaayo telefoonada LG
LG uu ahaa mid aad dhawaan la taleefannadooda Android in kaliya qoreysa ah qaababka ugu dambeeyey, laakiin sidoo kale ku faani eegno oo quruxsan oo caato ah oo firfircoon. Iyadoo la beddelo isbeddellada suuqa iyo shaqada ee doorashada user in telefoonada Android, LG sidoo kale uu helay saldhig user halkii waaweyn. Haddii aad sidoo kale tahay mid ka mid ah dad badan oo dhawaan ku yimiday oo loo qalab LG ah ka dib markii la isticmaalayo qalab macruufka ah muddo ku dhow waqti nolosha, waxaan ku helay hage fiican inuu kaa caawiyo sidii aad u heli iyada oo xogta habka wareejinta halkan.
Tani waxay qayb ka mid ah shaqada ka macruufka in LG run ahaantii ka dhigi doonaa nolosha ku gateen. Waxaan ma dafirayo, marka aad cag dhulka wuxuushnimada ah ee wajigan, waxa aad helaysaa in gacanta dhoofin / files dejinta ee kasta iyo talaabo kasta oo mid kasta oo nooc kasta oo xog sida xiriirada, sawiro, fariimaha, music iwm Qaar ka mid ah ka mid ah, waxaa looga baahan doonaa in aad u isticmaashid in aad xisaab google iyo iCloud labadaba, qaar ka mid ah waxa aad helaysaa in gacanta nuqul / walax, Jinka ka mid qalab si aad laptop ka dibna ka laptop ah in qalab kale. Qaar ka mid ah, waxa aad helaysaa in ay ka faa'iideystaan ​​barnaamijyadooda xisbiga saddexaad. In erayada fudud, haddii aad qaban aad u jeclahay lahaa miyirka, aad xitaa ma ay doonaynin inay yimaadaan cagta ah oo ka mid ah geeddi-socodka gudahood.
Qaybta 2. Easy xal: 1 click in ay xogta ka iPhone wareejiyo LG
Faa'iida ugu weyn ee hanaanka tilmaamay hore waa in halka fulinta ee suuqa kala iibsiga shakhsi waxaa laga yaabaa in ay fududahay, fulinta oo dhan oo iyaga ka mid, mid mid runtii bilaabo inuu qaato sahayday aad on. Waxaa si fudud ma jiro hab in aad isku dari kartaa oo dhan oo ka mid ah geedi kor ku xusan galay mid kaliya oo ay fuliyaan oo kaliya in la sameeyo waxa la. Tani waa meesha Wondershare MobileTrans tallaabo ee.
Wondershare MobileTrans Waa software ah ayaa diyaar u ah labada Windows iyo MAC users taas oo ka dhigaysa habka xogta wareegaayo mid aad u fudud. Waxay isku daraa dhammaan xogta joogtada wareejinta iyo kuwa fuliya laftiisa oo dhan waxay u baahan tahay in aad u waa inay riix badhanka ah ama laba! Tani software cajiib ah lagala soo bixi karaa http://www.wondershare.com/phone-transfer/ . Waxay leedahay version ah maxkamad xor ah iyo sidoo kale version premium bixiyo a at kaliya $19.95 oo tallaabo oo dhan ayaa gudaha buuxiyey. Waxa keliya ma aha kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso aad xiriirada, jadwalka, sawiro iyo music laakiin sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo guuraan Dalka Chine iyo Guda wac guud ahaan qalabka halkan ka baabi'inta baahida isticmaalka barnaamijyadooda kala duwan xisbiga saddexaad.
Hadda oo aan ognahay waxa sameeya Wondershare MobileTrans leeyahay in ay bixiyaan, aynu u aragno in tallaabo. Si aad u bilaabaan xogta habka wareejinta ka macruufka si aad u qalab LG, raac tallaabooyinkan:
1. Download Wondershare MobileTrans ka http://www.wondershare.com/phone-transfer/ oo ku xidh si aad laptop / computer. Sug rakibo si aad u dhamaystirto, taas oo caadi ahaan ma dheer qaadato. Waxaa Orod mar rakibo waa dhameystiran yahay.
2. labada hindiseen (macruufka iyo LG) si aad laptop / computer Connect via cable USB. MobileTrans Qaadan doonaa qaar ka mid ah waqtiga si loo ogaado iyo rakibi wadayaasha ay ka soo jeedaan.
3. Marka ay hindiseen la ogaan, waxaad heli doontaa daaqad muuqan labada isha iyo qalabka caga dhinaca gacanta bidix iyo midig ee shaashada siday u kala horreeyaan. Menu ee xarunta muujinaysaa waxyaabaha loogu tala galay in lagu soo wareejiyay qalab macruufka ah in ay phone LG ah. All ama qaar ka mid ah talooyinka la soo xulay karaa sida aad doorato adigoo sanduuqyada ay jeeg baahisey.
4. Ka dib doorashada sida aad doonayso inaad, dooro "Start Copy" si ay u bilaabaan xogta habka wareejinta. Hubi in labada aaladaha ay ku xidhan yihiin laptop / computer ka hor gujinaya "Start Copy".
5. Waxaad ka ogaan doonto muuqaalka kore ee daaqad la bar ah horumar ugu sareysa bandhigeen horumarka habka wareejinta in boqolkiiba. Waxaa Hoos liiska la muujinaya doonaa xaaladda shay kasta xogta si gooni ah loo soo guuriyeen. Waxyaabaha Kuwa kuwaasoo dhammaantoodba wareejiyo yeelan doonaa "Guusha" xaaladda qoraal ah iyaga ka gees ah.
6. Sug bar horumarka si ay u gaaraan 100% iyo in la hubiyo in mid ka mid ahaa qalab uu ka go'ay inta ay socoto sida ay natiijadu noqon karto waayida ama musuq-maasuq ee xogta. Marka bar hawsha muujinaysaa dhamaystirka geedi socodka xogta wareejinta, waxa aad si ammaan ah labada aaladaha aad ka laptop / computer ka saari kartaa.
7. Your LG cusub phone yahay oo dhan la qorsheeyey in la isticmaalo iyo hadda leeyihiin oo dhan macluumaadka telefoonka hore waxa ku jira. In kasta oo laga yaabaa in aad rabtid in aad nuqul ka mid ah dhammaan macluumaadka iPhone badbaadiyey ee file a gurmad aad laptop / computer, kuwaas oo sidoo kale loo samayn karaa iyadoo la isticmaalayo Wondershare MobileTrans.
Qaybta 3. Poll: Waa kuwee LG qalab aad u isticmaali?
1. LG Optimus ka badan 2
3. LG Ruuxa
6. LG Waat
8. LG canshuurtiisii ​​ka go'dayna
10. LG G3 luminayey
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga macruufka Qalabka inay casriga Sony
Saddex Siyaabaha crack BIOS password
> Resource > macruufka > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga macruufka Qalabka inay LG Phones